मापदण्ड विनाका सडक : पहिरोको मुख्य कारक
बिजनेस लाइभ भिडियो
अन्तर्वार्ता - विचार
इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
शुक्रबार, जेठ १६, २०७७Fri, May 29, 2020
तथ्यांकमा काेराेना भाइरस
निको भएका २४१५९६०
अपडेटः शुक्रबार, जेठ १६, २०७७ । ०८:४० बजे । स्रोत : coronavirus.jhu.edu / स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
मापदण्ड विनाका सडक : पहिरोको मुख्य कारक विकासभन्दा विनाश बढी, पहिरोमा पुरिएर ६ को मृत्यु
नेपाल लाइभ शुक्रबार, भदौ २७, २०७६, २०:२२
रोल्पा- अघिल्लो वर्षायाममा रोल्पाको रुन्टीगढी गाउँपालिका सखीमा गएको पहिरोमा १ घर पुरिँदा सुत्केरी महिलासहित ३ जनाको ज्यान गयो। घरमाथि सडकबाट आएको पहिरोमा पुरिएर उनीहरुको मृत्यु भएको थियो।
सोही वर्ष सुनिल स्मृति गाउँपालिका-७ अरेशमा गएको पहिरोमा परी गोठमा सुतिरहेका ३ जनाले ज्यान गुमाए। सडकसँगै सटेको गोठ पहिरोमा पुरिँदा उनीहरुले ज्यान गुमाएका थिए।
यस वर्ष समेत यो क्रम रोकिएको छैन। भाद्र १८ गते सुनछहरी गाउँपालिका-१ फुलिवनका १४ वर्षीय शुकबहादुर घर्तीको पहिरोले च्यापिएर ज्यान गयो। तीजको नाच हेरेर भाद्र १८ गते बिहान घर फर्कँदै गरेका घर्ती एक्कासी पहिरोमा परेका थिए। बिहानै पहिरोमा परेका घर्तीलाई दिउँसो मात्रै उद्धार गरिएको थियो।
स्थानीय फुलिवन बजारमा सुतेर बिहानै घर जान हिँडेका उनी फुलिवन नजिक रहेको झंकी खोलाबाट आएको पहिरोमा परे पनि घटनाको जानकारी दिउँसो मात्रै भएपछि प्रहरी घटनास्थल पुगेको थियो। घटना भएको लामो समयसम्म पहिरोमा फसेका शुकबहादुरको तत्काल उद्धार हुन सकेन। घटनास्थलमै उनको मृत्यु भएको बताइयो। सो स्थानमा अझै पनि पहिरो लडिरहेको हुँदा थप दुर्घटना हुन सक्ने भयले स्थानीय त्रसित छन्।
अविरल वर्षासँगै भाद्र २६ गते राती गएको पहिरोमा परी थवाङ गाउँपालिका-२ छेर्लोबाङमा ६ जनाको ज्यान गयो। पहिरोमा पुरिएर २८ वर्षीया फिरकुमारी बुढामगर र उनका ४ वर्षीय छोरा असल बुढामगर, ४० वर्षीय जय बुढा, उनकी श्रीमती मूलज्योति बुढा, छोरीहरु दिविष्टि बुढा र तिरङ बुढाको ज्यान गएको छ।
ईलाका प्रहरी कार्यालय थवाङको एक टोलीले उद्धारको काम गरेको थियो। उक्त टोलीलाई थप सहयोग र उद्धार गर्न प्रहरी चौकी रानागाउँ र खरिबोटबाट समेत थप प्रहरीले समेत उद्धार कार्यमा सहयोग गरेका थिए। पहिरोमा परी २ वटा घर र केही गोठ पनि पुरिएको छ।
यी घटनामध्ये अधिकांश घटनासँग सडक जोडिएर आएको छ। अव्यवस्थित ढंगले निर्माण गरिएका सडकका कारण पहिरोको प्रकोप बढ्दै गएको छ। स्काभेटर प्रयोग गरेर सडक निर्माण गर्दा ठाडो जमिनमा छिटै पहिरो जाने गर्दछ। जिल्लामा स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबाट समेत बजेट ल्याई सडकमा खर्च गर्ने गरेको देखिएको छ।
रोल्पाका सबै स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामा सडक परे पनि अधिकांश सडक मापदण्डअनुसार नहुँदा धनजनको क्षति हुँदै आएको छ। उपभोक्ता समितिले आफूखुसी सडक निर्माण गर्ने प्रवृत्तिले जिल्लामा निर्माण भएकामध्ये अधिकांश सडक गुणस्तरीय र अध्ययन गरी निर्माण गरिएका छैनन्।
गाउँ जोड्ने नाममा डोजर आतंक बन्द नहुँदासम्म सवारी दुर्घटना नियन्त्रण तथा भूक्षय न्यूनीकरण समेत हुन नसक्ने नेपाल निर्माण व्यवसायी संघ रोल्पाका अध्यक्ष मानबहादुर खत्रीको भनाइ छ। सडक संजाल प्रायः सबै वडासम्म पुगे पनि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन बिना बनाईएका कारण प्राकृतिक प्रकोपको खतरा रहेको अध्यक्ष खत्रीको भनाई छ। वर्षको अन्ततिर बजेट आएकाले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र ईन्जिनियरिङ अध्ययन बिना नै सडक खनिएका कारण अहिले नकारात्मक प्रभाव देखिन थालेको छ।
अराजक ढंगले बाटो खनिएका कारण मलिलो माटो बग्नुका साथै भूक्षय बढेको जिल्ला समन्वय समिति रोल्पाका प्रमुख राजबहादुर बुढाले बताए। 'वन विनासको हिसाबकिताब छैन, खोलाहरु उराँठलाग्दा बगर भएका छन। पानीका मुहानमा समेत असर गरेको छ,' प्रमुख बुढाले भने। गाउँ चिराचिरा भएकाले जमिनभन्दा बाटाहरु धेरै देखिन थालेको बुढाको भनाइ छ। योजनाविहीन ढंगले विकासको नाममा अनावश्यक बाटाहरु खनिएको समन्वय प्रमुख बुढाको भनाइ छ।
'एउटै बस्तीमा ३/४ वटा बाटाहरु खनिए पनि बाटाहरू प्रयोगमा छैनन्,' प्रमुख वुढाले भने, 'विकासको गलत ढंगले प्रयोग भइरहँदा यसले भविष्यमा निम्त्याउने अनिष्टको कल्पनासमेत गर्न सकिँदैन,' प्रमुख बुढाले भने।
डोजर प्रयोग गरी जथाभावी खनिएका सडकमा वर्षाको समयमा पहिरो खस्ने गरेको छ। धेरै स्थानमा पहिरो खसेकाले सडक अवरुद्ध हुँदा आवतजावतमा सास्ती हुने गरेको छ। डोजर प्रयोगले सडक थर्किएर दायाबाँयाको भाग कमजोर हुँदा सानो वर्षाले समेत ठुलै विनाश गर्न थालेको छ। 'जिल्लामा निर्माण गरिएका धेरै सडकको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरिएको छैन। वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्दा लामो समय लाग्ने भएकाले अधिकांश सडक त्यतिकै खनिएका छन्,' रोल्पा नगरपालिकामा कार्यरत एक प्राविधिकले भने।
वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन बिना सडक खनिएकाले जिल्लामा प्राकृतिक प्रकोपका घटना बढ्दै जान थालेको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल रोल्पाका अध्यक्ष मानसिं डाँगीको भनाई छ। 'सामुदायिक वनको स्वायत्ततामाथि नै हस्तक्षप गर्दै सडक निर्माण गरिएका छन्,' अध्यक्ष डाँगीले भने, 'विना मापदण्ड यसरी सडक निर्माण भए आगामी दिनमा झनै ठूलो जोखिम आउन सक्छ।'
हाल ट्र्याक खोलिएका समेत गरी जिल्लामा ४ सय ४७ किलोमिटर सडक संजाल विस्तार भएको जिल्ला समन्वय समिति रोल्पाको अभिलेखमा उल्लेख छ। ती सडकमध्ये अधिकांश हिउँदमा मात्र चल्छन्। पहिरोका कारण वर्षायाममा यातायात अवरुद्ध हुने गरेको छ। पक्की सडकको रुपमा प्यूठान र रोल्पाको सिमाना चतुर्भुजदेखि सिमलवाङ सडक र होलेरी खुम्वास सडक गरी जम्मा ४८ किलो मिटर मात्रै ओटासिल गरिएको छ।
पक्की सडकबाहेक अन्य सबै सडक बाह्रै महिना संचालन गर्न सकिँदैन। जिल्लामा रहेका राष्ट्रिय र रणनैतिक सडक मात्र बाह्रै महिना चल्ने गर्दछन्। गाउँ गाउँसम्म पुग्ने सबैजसो सडक तोकिएको मापदण्ड नभएका कारण सवारी दुर्घटना समेत बढिरहेको बताइएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
वार्ताका लागि रचनात्मक र सकारात्मक प्रयास आवश्यक : भारत
भारतमा कोरोना : सर्वाधिक संक्रमण देखिएका देशको सूचीमा नवौं स्थानमा
विश्वभर कोरोना: ५८ लाख ३ हजार संक्रमित, ३ लाख ५९ हजारको मृत्यु
कुमार पौडेलको हत्या आरोपमा उनकी आमाले दर्ता गराइन् १० जनाविरुद्ध किटानी जाहेरी बुधबार, फागुन १४, २०७६
सुन तस्करीको आरोपमा १६ प्रहरी निलम्बन गर्न अख्तियारको पत्र [सूचीसहित] बुधबार, फागुन १४, २०७६
स्टिङ अप्रेसनविरुद्ध बहस : वरिष्ठ अधिवक्तादेखि संवैधानिक कानुनविद्‍सम्मको लाइन किन लाग्यो? बुधबार, फागुन १४, २०७६
चीनमा दुई दिनमा २८ नयाँ संक्रमित फेला परे शुक्रबार, जेठ १६, २०७७
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको दोस्रो पटक भारत र चीनबीच मध्यस्थताको प्रस्ताव शुक्रबार, जेठ १६, २०७७
पिसिआर परीक्षण रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि ४५ जनालाई घर पठाइयो शुक्रबार, जेठ १६, २०७७
जटही र खजुरी नाका अनिश्चितकालका लागि बन्द शुक्रबार, जेठ १६, २०७७
वार्ताका लागि रचनात्मक र सकारात्मक प्रयास आवश्यक : भारत शुक्रबार, जेठ १६, २०७७
तीन महिनामै हटाइए स्वास्थ्य सचिव, लक्ष्मण अर्याललाई नयाँ जिम्मेवारी बिहीबार, जेठ १५, २०७७
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट वक्तव्य [पूर्णपाठ] बिहीबार, जेठ १५, २०७७
कोरोना संक्रमणबाट थप एक जनाको मृत्यु : स्वास्थ्य मन्त्रालय बिहीबार, जेठ १५, २०७७
इलेक्ट्रिक र हाइब्रिड कारमा ८० प्रतिशत भन्सार र अन्तशुल्क लाग्यो, यस्ता छन् करका दर बिहीबार, जेठ १५, २०७७
विवाहित र अविवाहितले कतिसम्म आम्दानी गर्दा १ प्रतिशत कर तिरे पुग्छ? बिहीबार, जेठ १५, २०७७
परराष्ट्र नीति गौंडागौंडाबाट सञ्चालित हुँदैन : मिनेन्द्र रिजाल [अन्तर्वार्ता] नेपाल लाइभ
बेइजिङ गम्भीर अध्ययनमा होला तर बोलिहाल्दैन : महेश मास्के [अन्तर्वार्ता] नेपाल लाइभ
मध्यम वर्गले नगुमाउँदासम्म विद्रोह हुँदैन : रामेश्वरप्रसाद खनाल [अन्तर्वार्ता] सविन मिश्र
‘रुकुम नरसंहार’मा निर्मला प्रकरण जसरी हाम्रो शिर नझुकोस् नेपाल लाइभ
सहर केन्द्रित अनलाइन कक्षा : ठूलो हिस्सा पहुँच बाहिर मधुसुदन बुर्लाकोटी
विसर्जनको संघारमा नेपाल रेडक्रस अभियान जगदिश भट्टराई ⁄ दीपक घिमिरे
भारतसँग देखाउनु पर्ने सुझबुझ भानु बोखिम
हामी कति राष्ट्रवादी? बुधबार, जेठ १४, २०७७
सिमाना, एमसिसी र षड्यन्त्र मंगलबार, जेठ १३, २०७७
फर्जी प्रधानमन्त्रीको देशवासीका नाममा सम्बोधन मंगलबार, जेठ १३, २०७७
त्रिभुवन विमानस्थलले सुरु गर्‍यो उडान खुलेपछिको लागि तयारी मंगलबार, जेठ १३, २०७७
लकडाउनपछि कसरी चलाउने सार्वजनिक यातायात? सोमबार, जेठ १२, २०७७
अन्तर्राष्ट्रियतर्फ आइतबार ५ उडान तथा अवतरण हुँदै आइतबार, जेठ ११, २०७७
खेलकुदले जुराएको प्रेममा जात तगारो, कसरी मारिए नवराज? मंगलबार, जेठ १३, २०७७
सीमा विवाद बढेसँगै नेपाल र भारतका ह्याकरबीच साइट ह्याक गर्ने प्रतिस्पर्धा, सुरक्षा निकाय रमिते शुक्रबार, जेठ ९, २०७७
Help Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal
Regd Number :
News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9851030103 (विज्ञापनका लागि मात्र)
सूचना विभाग दर्ता नं.
© Nepal Live. -2020 All rights reserved. Site by: SoftNEP